Mmetụta nke Semalt Na-eme Ka Echiche Ya Banyere Otú Apple nwere ike isi gbanwee SEO Marketing
Michael Brown, Ọkachamara Onye ahịa na-aga nke ọma, na-ekwu na Apple amalitelarị ọgbọ 6 nke ọfụma iPhone yana ngwaọrụ ya ọzọ, Apple Watch. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji smartwatches na-eme nchọpụta, ụzọ Apple si banye na nkà na ụzụ wearable nwere ike ịkpọsa ụzọ ọhụrụ nke isi mee ihe gụnyere nnukwu mgbanwe na mpaghara SEO Marketing .
Ugbu a Apple yiri kaen na-agbanwe iwu nke SEO mpaghara, ọ bụrụ na ị na-agba ahịa azụmahịa, ọ bụ oge iji gbanwee ụzọ ọhụrụ nke ịzụ ahịa nke ụlọ ọrụ ahụ kwadoro iji nyere gị aka ịnọ n'ihu ndị na - agba gị.
Apple Watch: Na-eweta technology wearable na limelight
Smartwatches anọwo gburugburu ruo ọtụtụ afọ. Otú ọ dị, ọ dịghị nke ngwaọrụ ndị a enwere na ahịa. Ọ bụ ezie na ngwaọrụ ndị na-enweghị ike emeela ka ha nwee mmasị, ahịa ha na nyocha ha bụ lukewarm - umzuege klein. Ma nke ahụ bụ ruo mgbe a kwụsịrị Apple Watch. Na mberede, ebe ọdịda anyanwụ gbanwere, ndị mmadụ wee malite iji nkà na ụzụ wepụ ihe.
N'iji njirimara ndị dị ka onye enyemaka ntanetị rụọ ọrụ olu, Apple Music, na Apple Play nakwa ọtụtụ ngwa ndị ọzọ, Apple Watch na-enye ndị na-agba ọsọ ya ego maka ego ha.
Otu n'ime njirimara ndị nyere Watch Watch Apple bụ asọmpi ọgbara ọhụrụ ya. Gịnị kpatara ngwa a ji dị mkpa? Ihe a dị mma maka SEO ebe ọ bụ na kama iji gosipụta map ma ọ bụ inye ntụziaka ndị a na-anụ, smartwatch na-eji usoro a maara dị ka "nzaghachi haptic" iji nye ntụziaka ntụziaka na-enweghị anya n'emeghị ka ndenye iji aka.
Ọ bụ ezie na oge ga-akọwa otú ọfụma a si dị irè maka igodo, mmasị ndị usoro ahụ na-eme yiri ka ọ dị njọ maka ngwaọrụ ọhụrụ. Na ịchọrọ na a maara Apple na ọ na-ebute ngwaọrụ ndị dị elu, nke a na-akọwa ihe mere ọha na eze ji eji obi ụtọ na-ekiri nche.
mmekọrịta Siri na Bing
Ruo ogologo oge, ndị ọrụ adabere na search engine s ịchọta azụmahịa na mpaghara ha. Na nso nso, Google na-eduga mkpọ, karịsịa maka nsonaazụ mpaghara. ihe Google choro na -
Otú ọ dị, site n'ibuli elu nke smartphones, ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ ozi na ngwaọrụ mkpanaka karịa kọmputa ha. Nke a nwere mmetụta nke ịgbanwe otú e si gbaa ajụjụ. Kama usoro a na-edekarị maka ịde ajụjụ n'ọgba akwụkwọ, ndị ọrụ na-ekwu ajụjụ ha site na smartphones 'microphones. Na ọbịbịa Apple Watch, Siri nwere ike ime ngwa ngwa ọhụrụ ma gbaa ndị ọrụ ume ikwu ajụjụ ha ma e jiri ya tụnyere ịpị ha.
Mgbe ị rịọrọ Siri ka ị chọọ ụlọ nri burger na mpaghara ahụ, onye inyeaka dijitalụ ga-emepụta ihuenyo ahụ na ọtụtụ nsonaazụ mpaghara. Ọ bụ ezie na Siri jiri Bing iji nye nsonaazụ ọchụchọ, ndị ahịa nke obodo nwere ike ilekwasị anya na Bing karịa Google iji dọta ndị ọrụ Apple SmartWatch.
Atụmatụ Apple Apple bụ Apple Maps dị ka usoro igodo usoro igodo. Ruo ọtụtụ afọ, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị mmadụ ejiriwo Google Maps gụnyere ndị ọrụ iPhone. O yikarịrị ka ọ ga-agbanwe mgbe elekere anya na-akwalite ọgbọ ọhụrụ nke ndị ọrụ Apple Maps. Nke a pụtara na ndị ahịa n'ahịa ga-eme ihe iji jide n'aka na ndị ọrụ nwere ike ịchọta azụmahịa ha na Apple Maps.
Apple Maps yiri ka o nwere ụzọ dị iche iche a ga-esi jiri ya tụnyere ndị na-asọmpi ya dịka Google mgbe ha na ndị na-azụ ahịa. Kama ịbịakwute nsoro azụmahịa gị, ọ na - enye ndị nwe ụlọ ahịa aka ịmata atụmatụ ha ma nye ezi data na ndekọ ha.
Ọ bụ ezie na nsonaazụ ọchụchọ mpaghara na-eme nnukwu ebili mmiri na usoro nyocha nke Google, nkà na ụzụ ọhụrụ nke Apple nwere ike ime ka ọ dị ọhụrụ, nweta nsonaazụ ọchụchọ ọchụchọ GPS. Nke a nwere ike iyi ụda, ma ọ dịghị njọ ịkọ ọdịnihu.
Mpempe akwụkwọ mobile na njirimara mmekọrịta
Mpempe akwụkwọ Kupọneti enweelarịrị ama ewu na ndị ọrụ ama ama gụnyere atụmatụ mmekọrịta dịka QR codes. Ka oge na-aga, ndị ọrụ ga-achọ ka ọ bụrụ ọganihu karị na ozugbo, yabụ ọ bụrụ na ịchọta ụzọ iji mee ngwa ngwa ngwa ngwa karịa asọmpi gị, ị ga - enwe ike ịbịakwute ahịa.
N'ikpeazụ, isi ihe nyocha nke obodo nwere ike ọ gaghị agbanwe n'otu abalị, ma Apple Watch agbanweela otú e si eduzi ahịa ahịa SEO ruo ọtụtụ afọ. Ugbu a, ndị ahịa na ndị nwe ụlọ ahịa ga - etinyekwu oge maka optimetrị maka Apple Maps na Bing iji nweta asọmpi asọmpi maka ndị ha na - agba ọsọ.